Welcome to Aayaha Nolosha » QIIMAHA QUDAARTA EE SUUQYADA MUQDISHO OO SARE U KACAY.
QIIMAHA QUDAARTA EE SUUQYADA MUQDISHO OO SARE U KACAY.
June 11, 2018 - Waxaa Qorey : Bile Mohamed -
Qiimaha qudaarta lagu iibiyo suuqyada Magaalada Muqdisho ayaa aad u qaaliyoobay mudadii ugu dambeysay kadib markii ay saamayn xoogan ku yeelatay xirnaashaha waddooyinka Magaalada Muqdisho.
Inta badan wadooyinka muhiimka ah ee Magaalada Muqdisho ayaa xiran waxayna taasi sababtay in sara u kacaan qiimaha qudaarta suuqyada magaalada, kadib saamayn balaaran ay ku yeelatay ganacsigooda.
Qaar ka mid ah ganacsatada Qudaarta Muqdisho oo la hadlay wariye ka tirsan Wargeyska AAYAHANOLOSHA ayaa sheegay in ay saamayn ku yeelatay xirnaashaha wadada soo gasha Muqdisho, iyagana ay qaaliyeeyeen qiimihii ay iibin jireen qudaarta.
“Qiimaha Qudaarta aad ayay u uga kacday qiimihii hore aan u iibin jirnay waxaana u sabab ah xirnaashaha wadooyinka….Dadka aad ayay xiligan ugu baahi qabaan helida qudaarta qeybaheeda kala duwan waayo waxaa lagu jiraa bisha ramadaan….” Ayuu yiri isagoo intaa ku daray.
“Khudaarta waa iska taallaa, dadkii waa iska taaganyihiin, beeraleyda khudaarti waa keeneen, dadkii khudaarta qaadanayayna meel ay marsiiyaan ma lahan… siinka dheer ayey baabuurtooda ku xayiranytahay”Ayuu yiri mar kale yiri Cali Cameey oo ka mid ah ganacsatada qudaarta Muqdisho geysa.
Ugu dambeyn, ganacsatadaan ayaa ka codsaday dowladda in arrintaan ay wax ka bedesho, iyagoo xusay in ay dhibaato ku qabaan wadada isku xirta Afgooye iyo Muqdisho oo inta badan laga xiro siinka dheer, taas oo saameyn ballaaran ku yeelata ganasatada khudaarta waxaana intaasi u sii dheer wadooyin badan oo xiran gudaha magaalada Muqdisho.